Trump ayaa la sheegay inuu bixiyey oo keliya $750 canshuurta dakhliga ee sanadkii 2016… – Hagaag.com
Trump ayaa la sheegay inuu bixiyey oo keliya $750 canshuurta dakhliga ee sanadkii 2016…
Posted on 28 Seteembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in madaxwayne Donald Trump uu bixiyay oo keliya $750 oo ah canshuurta dakhliga sanadkii 2016, oo ahaa markii uu xilka u tartamay iyo sanadkii ugu horeeyay ee aqalka cad uu yimid.
Wargeyska oo sheegay in ay heleen macluumaadka iyo diiwaanka canshuurihii uu bixiyay Mr Trump iyo shirkadihiisa 20 sano ee ugu dambeeyay ayaa waxaa ku andacooday in canshuurta dakhliga uusan bixin 10 sano oo ka mid ah shan iyo tobonkaasi sano.
Macluumadkan uu daabacay wargeyska New York Times ayaa shaaca ka qaadaya in “muddo sanado ah uu madaxwayanha ka maaganayay bixinta canshuurta”,.
Mr Trump ayaa warbixinta uu qoray wargeyska ku tilmaamay “warar been abuur ah”.
“xaqiiqadii waan bixiyay canshuurta waadna arki doontaan marka aan canshuur celinta sameeyo,” ayuu u sheegay warbaahinta.
Madaxwayne Trump ayaa marar badan la kulmay caqabado dhanka sharciga ah ka dib markii uu diiday in uu hay’adaha ay khuseyso la wadaago dikumiintiyada la xiriira inta ay dhan tahay hantidiisa iyo ganacsiyadiisa.
Waa madaxwaynihii ugu horeeyay tan iyo sanadihii 1970-yadii kaasi oo aan shaaca ka qaadin canshuur celintiisa inkastoo aan sharci ahaan aysan waajib ku ahayn.
Macluumaadkan uu daabacay wargeyska ayaa ku soo beegmaya maalmo uun ka hor xilli lagu wado in Mr. Trump uu ka qeyb galo dood loo qabanayo isaga iyo musharaxa madaxwaynanimada xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden .
Waxaa sidoo kale toddobaadyo uun ay ka harsan tahay doorashada madaxwaynanimada ee lagu wado inay qabsoonto 3 bisha November.
Wargeyska ayaa xusay in ay dib u eegis ku sameeyeen canshuur celinta la xiriirta madaxwayne Trump iyo shirkadihiisa laga soo bilaabo1990-yadii, iyo waliba canshuurtiisa shaqsi ahaaneed ee sanadihi 2016 iyo 2017.